Sheekh ka Caan ah Magaalada Hargeysa oo ka Badbaaday isku Day Dil+Ciidamada Booliska oo aan weli hayn Cida Falkaasi ka Dambaysay. - Haldoornews | Haldoornews
Sheekh ka Caan ah Magaalada Hargeysa oo ka Badbaaday isku Day Dil+Ciidamada Booliska oo aan weli hayn Cida Falkaasi ka Dambaysay.
January 27, 2016 - Written by admin
Hargeysa(Haldoornews)-Sheekh maxamed cabdi carab oo ah culimada magaalada hargeisa ugu caansan ayaa ka badbaaday dil qorshaysan oo u muuqda mid lasoo agaasimay kadib markii rasaastii lagu riday ey la waayeen dad hubaysan oo soo weeraray gurigiisa.
Arrinkan ayaan dareen gaara dhaliyay,iyada oo beryihii u dambeeyey ay magaalada hargeysa ku soo badanayeen dilalka qorshaysan ee loo gaysto ashkaas gaar ah.
Ciidan muuqda iyo kuwa sirdoonka ayaa arinkan ku hawlan, laakiin wali ciidanku kuma guuleysan iney soo qabtaan dadkii dooneyey iney khaarijiyaan sheekhan.
Dhanka kale warar hoose oo Warqabadka Afgarad News uu helay ayaa xaqiijiyey in dhacadadan ay ka dambeysay faro ka hadal dagaal gaadhay oo dhex maray xaafada sheekha iyo dad kale oo ay jaar la ah sheekha